Famonoana ireo telo mianaka teny Imerintsiatosika: nalefa aty Antananarivo ny dosie, hisy famotorana lalina hatao | NewsMada
Famonoana ireo telo mianaka teny Imerintsiatosika: nalefa aty Antananarivo ny dosie, hisy famotorana lalina hatao
Noho ny fanohanana nataon’ny mpitory, nafindra aty amin’ny fitsarana ambony aty Antananarivo ny antontan-taratasin’ady mikasika ilay vonoan’olona nahafaty ireo telo mianaka teny Imerintsiatosika. Fantatra fa hisy famotorana lalina hatao indray, amin’ny faha-24 septambra izao.
Niteraka resabe hatrany ilay vonoan’olona namoizana ain’olona telo mianaka tao Imerintsiatosika, tapa-bolana lasa izay. Manoloana izany indrindra, nitondra fanazavana ny lehiben’ny fampanoavana ao amin’ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Arivonimamo, Rabearijaona Christian Jacquis. ”Efa nisy ny fifandraisana matetika nataonay tamin’ny zandarimariam-pirenena mba hahatomombana tsara ny famotorana. Nisy olona roa efa nalefa eny Tsiafahy ary dimy hafa nahazo fahafahana vonjimaika. Eo indrindra no hanaovana fanazavana satria mandeha ny resaka momba ny fisian’ny hoe fakana vola 5 tapitrisa Ar anaovana fitsirihana ny ra (ADN) an’ireo olona maty sy ny ra hita tamin’ny akanjon’ireo voasambotra”, hoy izy. Nohamafisiny hatrany fa tsy misy fitiliana ADN izany ka hosandaina na hitakiana vola na any amin’ny zandarimaria na any amin’ny fitsarana. Izany fitialiana ADN izany, amin’ny maha ”mesure d’instruction” azy, tsy maintsy amin’ny alalan’ny ”ordonnance”-n’ny mpitsara mpanao famotorana no mandidy ny fanaovana izany ary tsy ny mpitory na ny torina velively ny mandoa ny vola hanaovana izany. ”Didim-pitsarana vao misy ny fitiliana ADN raha ilaina. Efa misy ny sorabola voafaritry ny lalàna amin’izany ary tsy marina ny resaka aely hoe misy fitakiana vola momba izany. Resaka entina handotoana ny fitsarana izany satria tsy afaka maka vola na amin’iza na amin’iza momba izany ny fitsarana », hoy izy. Ny zandary rahateo, efa tratran’ity resaka ity ihany koa talohan’izany, ary efa nitondra fanazavana momba izany. Ireto farany izay nilaza fa hisambotra ireo olona manakorontana saim-bahoaka. Andrasana, noho izany, ny fivoaran’ny toe-draharaha.
Tsy nisy fandoavam-bola ho an’ireo nahazo LP…
Nakarina, omaly teny amin’ny fitsarana Anosy, ny raharaha nahafatesana telo mianaka teny Imerintsiatosika. Araka ny fanazavan’ny lehiben’ny fampanoavana Arivonimamo, ny 24 septambra ho avy izao no hatao ny famotorana lalina momba ity raharaha ity. Nampiakatra fitsarana ambony ny fianakavian’ny mpitory noho ny fisian’ireo olona dimy nahazo fahafahana vonjimaika (LP). Ity fanomezan’ny fitsarana fahafahana vonjimaika ity izay nahatonga resabe tany Imerintsiatosika sy tamin’ny tambajotra sosialy. Nisy ny filazana tamin’izany fa nisy ny fandoavana vola nahafahana namotsotra ireo olona dimy ireo. Roa lahy ihany ny nampidirina vonjimaika any Tsiafahy.
Nanazava, noho izany, ny lehiben’ny fampanoavana Arivonimamo fa tsy nisy ny vola naloa, na nangatahin’ny fitsarana tamin’ny fanomezana fahafahana vonjimaika ho an’ireo olona ireo. «Ny fanomezana fahafahana vonjimaika akory tsy hoe afa-bela ilay olona iray fa mbola ao anatin’ny famotorana tanteraka ny fitsarana. Tsy midika inona akory ny fanafahana vonjimaika na fampidirana vonjimaika am-ponja », hoy hatrany ny fanazavany. Miankina amin’ny tohin’ny famotorana ny ahafantarana ny tena marina momba ny raharaha.
Fikambanana Manasoa: « Fotoana fianarana ny lalao malagasy izao » 28/05/2020
Fetin’ny Pentekosta: maro ireo fiangonana hisokatra 28/05/2020
Oniversite enina: mety hihemotra ny tetiandro hidirana 28/05/2020
Raikitra ny andrana amin’ny fanafodin’ny covid-19: tsy vaksiny ary tsy tambavy CVO no navadika ho tsindrona 28/05/2020
Tetikasa famatsiana herinaratra: tohana 1,5 tapitrisa dolara avy amin’ny USAID 28/05/2020